Joshua 1:9—“Shinga, Usimbe”
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Bislama Bulgarian Cebuano Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Croatian Czech Danish Dutch Estonian Fijian Finnish Frafra French Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Iloko Indonesian Italian Japanese Kabuverdianu Kannada Kikongo ya Leta Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Lingala Lithuanian Malagasy Malay Malayalam Myanmar Norwegian Oromo Persian Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Romanian Russian Samoan Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tatar Thai Tsonga Turkish Tzotzil Ukrainian Valencian Vietnamese Yoruba
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Joshua 1:9—“Shinga, Usimbe”
“Handina kukurayira here? Shinga, usimbe. Usavhunduka kana kutya, nekuti Jehovha Mwari wako anewe kwese kwaunoenda.”—Joshua 1:9, Bhaibheri—Shanduro yeNyika Itsva.
“Ko handina kukurayira here ndichiti, Simba utsunge usatya kana kuvhundutswa, nokuti TENZI Mwari wako anewe kwose kwaunoenda.”—Joshua 1:9, Bhaibheri Rine Apokirifa.
Zvinorehwa naJoshua 1:9
Nemashoko aya, Jehovha * Mwari akavimbisa mushumiri wake Joshua kuti aikwanisa kuva ‘neushingi uye nesimba’ pasinei nezvinhu zvakaoma zvaakanga akatarisana nazvo zvaiita sezvisingakundiki. Joshua akanga asina chikonzero chekutya chero bedzi aizoteerera mitemo yaMwari nekuti zvaizoita sekunge kuti Jehovha anaye kuti amubatsire. Mwari akaratidza kuti akanga aina Joshua nekumupa mirayiro uye kumubatsira kuti akunde vavengi vake.
Chii chaizobatsira Joshua kuti ave ‘neushingi nesimba’? Aigona kukurudzirwa nekusimbiswa nemagwaro akafemerwa naJehovha akanga aripo panguva iyoyo. Izvi zvaisanganisira ‘Mutemo wese waakanga arayirwa nemuranda waJehovha Mozisi.’ * (Joshua 1:7) Jehovha akaudza Joshua kuti auverenge “nenzwi riri pasi pasi [kureva ‘kuufungisisa,’ Bhaibheri Rine Apokirifa] siku nesikati.” (Joshua 1:8) Kuverenga nekufungisisa magwaro kwakabatsira Joshua kuti ave nechido chakasimba chekuita zvinodiwa naMwari. Joshua aifanira kuita zvese zvaaidzidza muShoko raMwari uye ‘kunyatsochengeta zvese zvakanga zvakanyorwa mariri.’ Izvi zvaizoita kuti zvinhu zvimufambire zvakanaka uye kuti ave munhu akachenjera pane zvese zvaaiita. Izvi ndizvo chaizvo zvakaitika. Kunyange zvazvo zvinhu zvaisava mutserendende, upenyu hwake hwese Joshua akaramba achishumira Jehovha akatendeka.—Joshua 23:14; 24:15.
Mashoko akaudzwa Joshua naJehovha achiri kutikurudzirawo nanhasi. Anoratidza kuti Jehovha anoda chaizvo vanhu vanomunamata, kunyanya paya pavanosangana nezvinhu zvakaoma. Anoda kuti zvinhu zvivafambire zvakanaka sezvakaitika kuna Joshua. Vanogonawo kuva ‘neushingi nesimba’ kana vakagara vachiverenga nekufungisisa Shoko raMwari Bhaibheri, voita zvarinenge richitaura.
Mashoko akapoteredza Joshua 1:9
Pashure perufu rwaMozisi, Jehovha akaudza Joshua kuti atungamirire vaIsraeri. (Joshua 1:1, 2) Panguva iyoyo, vaIsraeri vakanga vava kugadzirira kupinda muNyika Yakapikirwa yeKenani. Asi vaifanira kurwisana nevavengi vane simba. Semuenzaniso, Joshua aifanira kurwisana nevaKenani, avo vakanga vakaipa chaizvo. * (Dheuteronomi 9:5; 20:17, 18) VaKenani vaivawo vakawanda uye vaiva nezvombo zvehondo zvakawanda kupfuura vaIsraeri. (Joshua 9:1, 2; 17:18) Asi Joshua akaratidza ushingi akaita zvaaiudzwa naJehovha. Uye Mwari aiva naye nekuti vaIsraeri vakakunda vakawanda vevavengi vavo mumakore 6 chete.—Joshua 21:43, 44.
Verenga Joshua chitsauko 1 pamwe chete nemashoko emuzasi nemamwe mavhesi anoenderana nearimo.
^ ndima 3 Jehovha izita raMwari. MuchiHebheru, zita iri rinonyorwa nemabhii 4 יהוה anoshandurwa kuti YHWH, uye anozivikanwawo seTetragrammaton. Pavhesi iyi, zita iri rakashandurwa kuti “TENZI” muBhaibheri Rine Apokirifa. Kuti uzive zvakawanda nezvaJehovha uye kuti nei dzimwe shanduro dzeBhaibheri dzisingashandisi zita iroro, ona nyaya yakanzi “Jehovha Ndiani?”
^ ndima 4 Magwaro akafemerwa aiva naJoshua ayo atavawo nawo muBhaibheri, anofanira kunge aisanganisira mabhuku 5 akanyorwa naMozisi anoti, Genesisi, Eksodho, Revhitiko, Numeri naDheuteronomi. Anofanira kunge aisanganisirawo bhuku raJobho, uye pisarema rimwe chete kana maviri.
^ ndima 6 Kuti uzive kuti nei paitofanira kuva nehondo yakadai, ona nyaya yakanzi “Nei Mwari Akarwisa vaKenani?” iri muNharireyomurindi yaJanuary 1, 2010.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Joshua 1:9—“Shinga, Usimbe”
Joshua 1:9 Inotsanangurwa—“Shinga, Usimbe”
ijwbv nyaya 10